नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): व्यापक भ्रष्टाचार र राजनीतिक दिशाहीनताका कारण नेपाल 'कोल्याप्स' हुने चरणमा पुगेको विश्लेषण अमेरिकी प्रोफेसरहरूले गरे !
व्यापक भ्रष्टाचार र राजनीतिक दिशाहीनताका कारण नेपाल 'कोल्याप्स' हुने चरणमा पुगेको विश्लेषण अमेरिकी प्रोफेसरहरूले गरे !
व्यापक भ्रष्टाचार र राजनीतिक दिशाहीनताका कारण नेपाल 'कोल्याप्स' हुने चरणमा पुगेको विश्लेषण अमेरिकी प्रोफेसरहरूले गरेका छन्। विश्वका ४० भन्दा बढी देशबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध अखबार न्यूयोर्क टाइम्सको गत मंगलबारको अंकमा अमेरिकी प्रोफेसरद्वयले नेपाल कोल्याप्स हुने चरणमा पुग्नुमा व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक दिशाहीनता, सुरक्षा निकायको गिर्दो मनोबल, प्रतिभा पलायन, धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडललगायतको ६ वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। विगत २० वर्षदेखि अधोगतिमा लागेको नेपाललाई 'कोल्याप्स' हुनबाट जोगाउन अन्तराष्ट्रिय समुदायले धेरै नै गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। संसारका नीति निर्माताहरूले चासोका साथ पढ्ने गरेको न्यूयोर्क टाइम्सका करोडौं पाठक छन्। जसका सम्पादकलाई भेट्न अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले समय माग्दा उनले आफूसाग एक
महिनासम्म समय नभएको बताएका थिए।
न्योर्कटाइम्समा प्रकाशित लेखको अनुवादसहित ‌‌‌‌--
- सेयोम ब्रोन/वान्दा फेल्बाब ब्रोन